बिकासको काम नदेख्ने बासुरी बजाएको मात्र देख्ने – प्रधानमन्त्री ओली::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
बिकासको काम नदेख्ने बासुरी बजाएको मात्र देख्ने – प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अघि सारेका विकास निर्माणको कामलाई सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
संञ्चारमाध्यमको भूमिका, संञ्चारमाध्यममा आएका समाचार प्रति सधै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि यस्तै गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै उनले केही मान्छेलाई भने पीर परेको बताए। उनले भने, “सरकारले धेरै राम्रा काम गरिरहे पनि समाचार भने मैले बाँसुरी बजाएको मात्र आउने गरेको छ। सञ्चार माध्यमले यो न्यूज दिन भन्दा बाँसुरी बजाएको न्यूज दिन्छन् भोली पनि । दया लाग्छ । भोलि पनि हेर्नुहोला बाँसुरी बजाएको फोटो छाप्छन् । यो फोटै छाप्दैनन् । ”
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएको भूमिगत बनाउने कार्यक्रमको शिलान्याशपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको नयाँ अध्याय शुरु भएको बताएका हुन् ।
उनले विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटका तार भूमिगत भएपछि शहरको सौन्दर्य बढ्ने उल्लेख गर्दै कुरुपताको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले यसबाट आम जनतालाई पनि सहज हुने र सेवा पनि सरल रुपमा प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
“यो योजना सम्पन्न भएपछि गुजुल्टिएको तार हट्छ। अब शहर कुरुप हुँदैन, चिटिक्कको शहर बन्छ।,” प्रधानमन्त्रीले भने, “पोलभरि गुजुल्टिएको तार देख्ने दिन अन्त्यका लागि यो काम भइरहेको छ।”
विद्युत्, टेलिफोनलगायत तार भूमिगत गर्ने काम काठमाडौँको महाराजगञ्जबाट शुरु भए पनि यसलाई देशका प्रमुख शहरमा विस्तार गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
यो आम चुनावको प्रचार अभियान होइन ‘भुलबस कुनै गल्ती भए सहुँला, संकटमा छरपस्ट नहोऔ’ : मन्त्री भट्टराई
कांग्रेसले सोध्यो: सरकार ! अझै साइत कुर्ने कि व्यापक परीक्षणमा लाग्ने ?
राप्रपा अध्यक्ष राणाकाे प्रश्न : अनियमितताको दुर्गन्ध प्रधानमन्त्रीज्यूसम्म पुग्यो कि पुगेन ?
सरकारले कोरोनाका कारण मृ’त्यु भएकाहरुको सूचना लुकाएको हुनसक्छः विप्लव
लकडाउन थप्नेलगायत विषयमा छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु